Online Marg | विवाहको उमङ्ग नसकिदै मनोज गजुरेलमाथि ठूलो बज्रपात
विवाहको उमङ्ग नसकिदै मनोज गजुरेलमाथि ठूलो बज्रपात
काठमाडौं। चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ । विवाहको उमंग नसकिदैं उनीमाथि बज्रपात भएको हो । उनले भाई गुमाएका छन् ।
मामा घरका भाईको निधन भएको उनले लेखेको स्टासवाट बुझ्न सकिन्छ । आइतवार लामो स्टटास लेख्दै मनोजले भाई प्रति निकै माया दर्साएका छन् । उनको लेखाई निकै भावविह्वल छ।
यस्तो छ गजुरेलको फेसबुक स्टाटसःः प्यारो भाइ विवेक तिम्रो भौतिक शरीरबाट निस्किएको आकास तत्व (आत्मा)को अनन्तयात्रा मङ्गलय बनोस् । यदी तत्कालै पुनर्जन्मको योग छ भने फेरीपनि हाम्रै मावली खलकमा जन्म लेउ, हामी प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ साने हरि ॐ तत्सत् अर्थात् यही नै सत्य हो
नभन्दै सानैदेखि संघर्ष गर्याै । माईजुको बाँच्ने साहारा भयौ । पाँच दिदिहरुको एक्लो माईती बन्यौ । आफन्तको आशलाग्दो सदस्य रह्यौ। हाम्रो हँसिलाे, प्यारो र मनपर्ने मावली भाइ थियौ । …तर, २२ बर्षको कलिलो उमेरमै शरीर छोड्यौ ! हामीलाई अन्त्यन्तै, अन्त्यन्तै र अत्यन्तै पीडा छोडेर गयौ भाइ
हाम्रा बुबा बितेपछि आमाले हामीलाई मावली गाउँमा गुँड सार्नुभयो । एक प्रकारले भनौं, मावलीघरमा शरण पायौं । बुबा नभएपनि बाल्यकालमा मामाहरुबाट एकप्रकारको अभिभावकत्व पायौं । त्यसमापनि माईलामामाको सरल र सहयोगीपनले आमालाई ७ वटा बचेरा च्यापेर माईतीमा बस्न सहज बनायो । तिमी त्यो व्यक्तीको वीज हाै जाेसँग हाम्रो ‘मामाभान्जा’भन्दा गहिरो प्रेम, अग्लो नाता र बलियो सम्बन्ध थियो
मृत्यु शाश्वत सत्य हो तर यति चाँडाे हुनुहुन्थेन, विस्मात यसैमा छ ! ६ सन्तानको भारी बोकेर दु:खका विकट पहाडबाट छिचोल्दै माइजू बल्ल सुखको श्वास फेर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर तिम्रो देहान्तले उहाँको यात्रामा फेरि डरलाग्दो भीरको उकालो बाटो आईपुगेको छ । माइजू, ५ दिदिहरु, तिम्रा मावली र हामीलाई तिम्रो अभावले सताई रहनेछ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली विवेक
‘विवेक’ मृत्युको कारण: ज्यानमारा सडकको कामचोर विभाग ! २२ बर्षीय भाइ विवेक सापकोटा काठमाडौबाट मोटर साईकलमा एक्लै पुर्व जाँदै थिए । २१ बर्षकै दयारामसिंह राजवंशी झापाबाट चन्दनकुमारसहित पश्चिम आउँदै थिए । महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको अमाहा भन्ने ठाउँमा दयारामको बाईक अनियन्त्रित भएर आफ्नो लेनमा कुदिरहेको विवेकको बाईकसँग जुध्न पुगे । विवेक र दयारामको मृत्यु भयो, चन्दन कुमार घाईते भए ।
दुर्घटनामा बितेका २१ बर्षिय दयारामपनि कसैको मुटुको टुक्रा थिए । उनका परिवारमा पनि ठुलो बज्रपात परेको छ । उनिप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली दयारामले मार्छु भनेर विवेकलाई हानेको पनि हैन होला, विवेकले मर्छु भनेर दयारामको बाईकमा ठोकिएका पनि नहोला ! सत्यतथ्य के हो, प्रहरीले पत्ता लगाउला तर अमाहा सडक दुर्घटनाको एउटा गम्भीर पाटोको बारेमा बोल्नैपर्ने भएको छ ।
हाम्रो भाइ विवेक अनि सम्भवत: दयाराम राजवंशी दुवैजना श्रमजिवी परिवारका सदस्य थिए ! उनिहरु त बितेर गए तर सडक मर्मत सम्भारमा गैरजिम्मेवार देखिएको सरकारका कारण निम्तिएका यस्ता दुर्घटनाले खोसेका विवेक र दयाराममा आश्रीत परिवारलाई न्याय र क्षतीपुर्ती कसले दिन्छ ? केन्द्र सरकार ? प्रदेश सरकार ? स्थानीय सरकार ? कि निर्माण र मर्मतको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी ?
सप्तरीको यो सडक दुर्घटना एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । देशैभरीका सडकमा यस्ता समस्या छन् । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । समाधानको अनुरोध गर्दा केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारलाई देखाउँछ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारतिर पन्छाउछ । स्थानीय सरकार सडक विभागलाई दोष दिन्छ । सडक विभाग ठेकेदारलाई दोष दिन्छ । ठेकेदार बजेट निकासा भएको छैन भनेर पन्छिन्छ ।
यस्ता दुर्घटना नदोहोर्याउन प्रतिवद्धता जाहेर गर्नसक्छ ? प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गराउन र मुख्य दोषिलाई दण्डित गर्न सक्छ ? दबाब कायम राखौं ।